Gbasara anyị - Hbhenglun Co., Ltd.
hbhenglun.com bụ UNKGOBIKE Official Weebụ, na-enye ndị ahịa igwe eletriki kachasị mma, igwe eletriki igwe eletriki, igwe eletriki igwe eletrik, mpịachi igwe eletriki, igwe eletriki obodo, wdg. Anyị nwere ndị ọrụ R & D ọkachamara na anyị nwere ike ịhazi igwe eletrik maka gị. , na anyị na-enye VIP DIY ọrụ. Bestdị ahịa anyị kachasị mma dị na ngwaahịa ma nwee ike ibuga ngwa ngwa.
Hebei HengLun Trading Co., Ltd. ọkachamara igwe eletriki igwe eletrik, na-enye ndị ahịa ugwu igwe eletrik kachasị mma, igwe eletriki igwe eletriki, ngwa ebike na batrị ebike. Anyị nwere ndị ọkachamara na teknụzụ na ndị na-emepụta ihe, yana usoro mmepụta ihe dị elu, ụlọ ọrụ nhazi ọfụma, ogbako ọgbakọ yana iji melite ngwa ahịa nnabata, na-enye nkwa ndị a pụrụ ịtụkwasị obi na ọrụ ndị nwere echiche.
A na-akwado iwu OEM na ODM na ụlọ ọrụ HengLun. A ga-aza ajụjụ ndị ahịa n'ime awa 24, HengLun Pursue iji nye ndị na-azụ ahịa A pụrụ ịdabere na ya, ọnụahịa asọmpi, nzaghachi ngwa ngwa. Anyị raara onwe anyị nye nlezianya ịdị mma na njikwa ndị ahịa na-echebara echiche, ndị ọrụ anyị nwere ahụmahụ na-adị njikere mgbe niile iji kpaa maka ihe ị chọrọ ma hụ na ndị ahịa zuru ezu, afọ ojuju. N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ụlọ ọrụ anyị ewebatala usoro nke akụrụngwa dị elu gụnyere akara mmepụta akpaka, mkpọpu ala CNC, Akụrụngwa ikike nyocha batrị.
Na mgbakwunye, anyị enwetara CE, UL asambodo. Ọzọkwa, anyị ahịa kewara na anụ ụlọ na esenidụt, na-ebupụ ihe karịrị 10,000 iberibe igwe eletriki igwe eletriki na Europe, South & North America na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia kwa afọ. Anyị bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị na obodo mara mma, TianJin. anyị nọ nso ọdụ ụgbọ mmiri TianJin.
Okwukwe nke ụlọ ọrụ na-adị ndụ site na ịdị elu dị elu ma na-etolite na ntụkwasị obi, teknụzụ dị elu na-eme ka ndị mmadụ nwee ndụ na ezigbo ọrụ maka ndị ahịa.
HengLun china kacha mma igwe eletriki igwe eletrik site na 2006 anọwo ọtụtụ afọ iji sonye na Canton Fair, mmepe nke ụdị ọhụrụ na ihe ngosi gara aga, anyị nwere ndị R & D siri ike na ndị ahịa, a na-ebupụ ngwaahịa ahụ ụwa.we jiri obi ụtọ nabata ndị enyi na ihe ngosi ahụ, ma ka anyị mepụta ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, gburugburu ebe obibi, ọfụma na-azọpụta ume n'oge ọhụrụ.
The kọntaktị: Andy
Ekwentị: +86 13739731501